Ndi jeans dị mma maka ịgba ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Womengba ịnyịnya jeans ụmụ nwanyị - onye ndu kachasị
Womengba ịnyịnya jeans ụmụ nwanyị - onye ndu kachasị
Ndi jeans dị mma maka ịgba ígwè?
Cgba ígwè jeansbụ denimjeansna-etu ọnụ ezi uche arụmọrụ na-eme ka ha ala okirikiri na. Elezie, nke a pụtara naigwe jeansna-agbatị karịa nkịtịjeans, na-eku ume ma na-adịgide adịgide.
Dị ka ndị bụbu ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ọ ga-abụ na anyị etinyela oge karịa iji lycra karịa bea na-eche maka ya - yup, yana obere uwe mwụda na jersey na uwe ndị ọzọ niile siri ike dị mma maka ịnya ọzụzụ ogologo oge, mgbe ụfọdụ lycra abụghị naanị na Gbanyụọ anaghị aza - Ee e, ọ bụghị maka ịgba ịnyịnya ígwè n'obodo. Eleghi anya ị na-anya nwayọ, ị naghị aga njem tere aka, ma ọ bụ, ikekwe nke ka mkpa, ị nwere ike ịdị ka onye nwere ezigbo mma oge ị ruru ebe ị na-aga ma enweghị ebe ị ga-agbanwe uwe gị - yabụ ka anyị lelee anya na ụfọdụ nke uwe nhọrọ ndị dịịrị gị maka ịgba ịnyịnya ígwè na obodo. (egwu ohuru) - Biking bụ ụzọ dị mma iji hụ obodo.
Ọ na-agbakarị ọsọ ọsọ karịa ịnya ụgbọ ala, ị na-ewere obere ohere n'okporo ụzọ, ma n'ezie ọ dịghị emerụ ma ọlị. Gba ịnyịnya ígwè na-agbanwe agbanwe karịa njem ọha na eze, ọ dịkwa mma n'ihi na ọ bụ mmega ahụ, na anyị niile nwere ike iji ntakịrị ya, nri? - Mgbe anyị na-agba ịnyịnya ígwè n’obodo, ụfọdụ n’ime anyị nwere ike ọ gaghị achọ ịdị ka ap ro. Ọ ga-amasị anyị ma eleghị anya ịgaghị ịga n'ụlọ ahịa na-eyi lycra n'ụzọ ụlọ.
N'ezie, ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ịchọrọ ịla ebe anyị na-aga n'ụzọ dị jụụ, nke dị jụụ, na nke dị nchebe - ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọ ala ị na-arụ ọrụ n'obodo? Igwe kwụ otu ebe mgbe ahụ ị naghị emega ahụ, ma ọ bụrụ na ị mee ya iji chekwaa oge, ị gaghị achọ ịsa ahụ ma gbanwee uwe mgbe ị rutere ọrụ. Ikwesiri inwe ike ịgbanwe site na igwe kwụ otu ebe gaa n'ọfịs ma laghachi na igwe kwụ otu ebe. Yabụ ịchọrọ uwe gị ka ọ rụọ ọrụ ma dịgide, mana bụrụkwa ọmarịcha mma.
Ugbu a nchekwa ga-abụ ihe kacha mkpa, ebe ọ bụ na obodo juputara n'ụgbọala na ndị mmadụ, na mkparịta ụka na ụgbọ ala nwere ike ịtụ ụjọ na ụjọ, ọbụnadị ihe egwu dị egwu maka ndị na-agba ịnyịnya. Ọ dabara nke ọma, ọ bụghị mgbe mgbe, ma otu n’ime ihe ndị akacha akpọrọ ihe mere ndị mmadụ achọghị iji igwe kwụ otu ebe n’obodo bụ n’ihi na ha na-atụ ụjọ ụgbọ ala. Yabụ nọrọ na nchekwa ma jiri ọkụ mee nke a ma ọ bụ ịnwere ike iji agba na-enwu gbaa na uwe gị.
Iji maa atụ, Fluro sọks, Fluro overshoes, Fluro vest. A na-ahụkarị agba ndị na-enwu gbaa, nchọpụta e mere na-egosipụtakwa na ọ na-abụkarị ihe na-enwu gbaa, ihe ndị na-atụgharị uche, na ìhè n’akụkụ ndị na-emegharị ahụ. Dịka ọmụmaatụ ikpere na nkwonkwo ụkwụ. - Akpụkpọ ụkwụ.
Ugbu a, ọ bụrụ n'ịchọrọ iji obere mkpịsị ụkwụ, ị ga-achọ ụdị dị iche iche igwe kwụ otu ebe. Yabụ ịkwesịrị iyi akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe, nke pụtara na ị nwere ike ịpụ igwe kwụ otu ebe ma jee ije ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-eji pedal mgbe niile dị ka ndị a, ị nwere ike ịhapụ steam.
Naanị ihe ị ga-eburu n’uche bụ na mkpịsị ụkwụ na-emeghe, dịka akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ flip flops, nwere ike ịdị ntakịrị ihe egwu. Y’oburu n’inwe obi ojoo iburu onye ogba aghara ma oburu n’onyere gi n’inwe igwe kwụ otu ebe ka ị na - ete mkpịsị ụkwụ gị mgbe ị ga - enweta abrasions, ọ na - afụ ụfụ, ọbụghị ịkọwara ya na ọ na - ewute ya ichere ka ha gwọọ ka ị wee yikwasị akpụkpọ ụkwụ gị . Nke ahụ kwuru, sị, ọtụtụ n'ime anyị na-etinye ihe egwu ahụ.- Ma mgbe ahụ enwere ogologo oge.
Ejila akwa gị kacha mma k ma ọ bụ nke kachasị mma gị, ọkachasị mgbe ọ na-apụkwa, ị kwesịrị izere ihe ọ bụla chọrọ ịsacha aka ebe ị ga-arụ ọtụtụ ọrụ maka onwe gị. N'ikpeazụ, uwe ọcha. Agaghị m eme ya n'ihi na okporo ụzọ na wiil ndị ahụ mara ezigbo unyi ma ọ bụrụ na ị nọ gburugburu oge niile, ọ gaghị ewe oge tupu uwe ndị ọcha dị ka nke ahụ.
Nkasi obi. Ọbụna mgbe ịnyịnya ígwè jiri nwayọ pụtara na ị nọ na Punch gị butt na pedal. Yabụ, uwe na-esiwanye ike ma ọ bụ na-enweghị onwe ya, na-ekpo oke ọkụ ma ọ bụ na-ajụ oyi anaghị adị mma, ọ dị mma? Ya mere, anyị nwere ndụmọdụ ole na ole kachasị elu maka gị - Uwe ọkpa gị kwesịrị ịtọpụ ma ọ bụ gbatịkwuo ka ị nwee ike ịda ụkwụ na nkasi obi na nke kachasị mkpa, ikekwe na-agbanye ụkwụ gị na igwe kwụ otu ebe.
Ma mgbe ahụ naanị ihe ọzọ ị ga - ele anya bụ ụkwụ aka nri gị - ị nwere ike iji obere mkpịsị aka iji jide ya ka ọ bụrụ na ị tụgharịa ya ka agbụ gị ghara ịbanye n'ụzọ ọ bụla achọghị m otu n'ihi enweghị agbụ. - nịịka bụ ihe ngwọta zuru oke n'echiche m, ma ị gara maka nhọrọ lycra ma ọ bụ akpa. N'ụzọ bụ isi enwere nnwere onwe ịgagharị mgbe niile, ha na-edobe obi umeala gị ma ghara ijide gị na draịva mbanye.
N'ụzọ dị ịtụnanya, uwe mwụda ziri ezi nwere ike ịbụ uwe mara mma maka ịgba ígwè. Uwe mwụda ma ọ bụ nke siri ike nwere ike ọ bụghị n'ihi na ha anaghị ata ahụhụ ma na-ekpughe. Ma uwe mwụda nwere ike ime ọtụtụ ihe Hapụ ohere ka ị zọpụ ụkwụ, na n'ezie ị nwere ike ịmịnye azụ azụ ahụ n'úkwù ihu iji chekwaa ùgwù gị.
Ezi ndi Scots, biko mara kwa. Maka ezigbo ogologo, uwe mwụda na-asọ asọ, ị ga-atụrịrị ya n'okporo ụzọ, ebe ị kwụgidere ya n'azụ ụkwụ ma ọ bụ breeki nwere ike bụrụ ihe dị egwu - nkwụsị na-esote bụ uwe ime gị. O doro anya na okwu dị ezigbo mkpa dịka ọ bụ akwa uwe dị na akpụkpọ ahụ gị, chọta ihe dị mma, agaghị adaba ma ọ bụ mebie, na isi okwu bụ na ị nwedịrị ike ịnweta uwe ime akwa yiri nke ahụ ị na-agba ịnyịnya ígwè mgbe nile, yabụ ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị na-eyi, gịnị ma ị ga-enyocha ha - ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya ígwè, ị nọ na ihe ndị ọzọ na nke ahụ bụ otu n'ime ihe ukwu banyere ya.
Ma ọ na-ewetakwa ihe ịma aka. Ọ dị mkpa idozi uwe gị dị ka o kwesịrị. - Ee, n’oge ihu igwe dị mma, ọ kacha mma iyi uwe elu ma gbanwere uwe elu ma ọ bụ uwe elu nwanyị mgbe ị ruru ebe ahụ.
Ọsụsọ na-eme ka a ghara izere ya na okpomọkụ ma ọ bụrụ na uwe gị ga-ata ahụhụ n'okpuru akpa akpa gị. Ya mere, debe ha ruo mgbe ị ga-arụ ọrụ. - Ee, na mgbe ihu igwe na-atụ oyi, ọfụma, enwere nnukwu jaketị na-agba ịnyịnya igwe ma mara mma nke ukwuu na ikuku na mmiri na-eguzogide ọgwụ.
nnukwute nnupu isi
Ugh, mmiri ozuzo bụ ihe ọ bụla na-eme njem ogologo obodo iji gbochie ogologo ọkpa iji chebe onwe gị, ma ọ bụ ịnwere ike ịnabata na ụkwụ na ụkwụ gị ga-etinye mmiri, ma weta ụfọdụ uwe ogologo ọkpa na akpụkpọ ụkwụ maka ọfịs ahụ. Ugbu a ụbọchị ndị a, ịgba ịnyịnya ígwè na-enweghị mmiri nwere ike ịmasị ma maa mma na ọkara nke elu gị, ma ọ bụ ịnwere ike ịga poncho, nke nwere ike ọ gaghị adị oke mma, mana ọ ga-echebe gị karịa na mmiri. (egwu dị egwu) Ihe ngosi pụrụ iche nye ndị nwe ala ebe a.
Biko kee eriri n'úkwù gị ma ọ bụ jiri eriri ma ọ bụ ị nwere ike idina na onye na-ewu ụlọ na-eme ihe n'eziokwu na ọ dịghị onye chọrọ ịhụ nke ahụ. Ndo.- Mba, ị bụghị. - Mba, ha adighi.- Oh, gbaghara m, gbaghara.- Ihe ndetu pụrụ iche nye ụmụ nwanyị.
Nwere ike ịtụle akwa akwa akwa ma ọ bụ elu n'ihi na ụfọdụ ndị chọrọ ịhụ nke a ma ị nwere ike ịdị mma igosi, mana ọ bụ ihe egwu na nsị na a beụ. Ma kwere m, na-ekwu okwu site na ahụmịhe, nke a abụghị ihe na-atọ ọchị. Ka anyị nwee olileanya na isiokwu a ga - enyere gị aka inwe ahụ iru ala ịnyagharị n’obodo ahụ, mana ọ ga - adịkwa mma ma ị bụ onye na - agba ịnyịnya ígwè nke na - anaghị akwụsị ịbụ onye na - agba ịnyịnya, ọbụlagodi ịnyịnya ígwè, ma ọ bụ onye na - agba ịnyịnya igwe, mana achọghị ka ọ dị ka onye na-agba ịnyịnya. .- Ọ dị mma ma dị mma .Okay, ugbu a ọ bụrụ na ịchọrọ ilele edemede ọzọ gbasara ịgba ịnyịnya ígwè ebe a na GCN, enwere nke ị nwere ike ịpị, gbadaa ebe anyị wetara gị isi Nye ndụmọdụ anyị.
Kedu ihe ụmụ nwanyị kwesịrị iyi na ịnyịnya ígwè?
Cycgba ọsọ ụmụ nwanyịkit - gịnị ka m kwesịrịeyimgbe m naigwe kwụ otu ebe?
Nkedo. Obere padded nwere ike iyi ka ọ bụ echiche na-adịghị mma, mana enwere otu ezigbo ihe kpatara yaeyiha.
Ogwe aka na ụkwụ na-ekpo ọkụ.
Jul 15. 2020bọchị 2020
Enwere ọtụtụ ihe gbasara ịgba ịnyịnya ígwè bụ otu maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, mana otu mpaghara ebe anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ esemokwu dị na uwe, nke pụtara ihe n'ezie n'ihi na enwere ụfọdụ ndịiche dị mkpa na ọdịdị ahụ. Ya mere, ka anyị lee ka esi agbanwe gia gị ma ọ bụrụ na ị bụ nwanyị. (Dramatic drumming bangs) Ana m enweta ọtụtụ ajụjụ site na ụmụ nwanyị ndị na-amalite ịgba ịnyịnya ígwè banyere ụdị akụrụngwa kachasị mma iyi igwe kwụ otu ebe? Ma n'ezie, enwere oke nhọrọ n'ebe ahụ nke na ọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya.
Mgbe ụfọdụ, uru na ọghọm dị n'ụdị ụfọdụ nke gia na-apụtaghị ìhè ruo mgbe ị mere njem ole na ole. Yabụ ebe a bụ eziokwu, ọ dị mma, eziokwu m gbasara nhọrọ akụrụngwa maka ụmụ nwanyị. (music dị jụụ) Uwe ị na-eyi n’elu igwe kwụ otu ebe bụ otu n’ime ihe kachasị mkpa maka nkasi obi gị.
Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnụ ụtọ igwe kwụ otu ebe gị, ọ dị ezigbo mkpa ka ị nwee ahụ iru ala na ya. Ọfọn, akụkụ ya kwesịrị ịdị mma nke ọma, n'ezie, n'ihi na ka anyị chee ya ihu, onye ọ bụla chọrọ ka ọ dị mma. Ma na-achọ mma bụ bụghị dị ka ihe dị mkpa maka ego m dị ka nke ọma, nke bụ n'ezie dị ka mma maka m.
Ngwa gị bụ ihe dị na kọntaktị gị na akpụkpọ ahụ gị, nke ahụ na karịa oche oche niile, ihe mkpuchi, mkpụmkpụ, mee ka ọ bụrụ ihe mbụ na-akụ gị na igwe kwụ otu ebe. Tụkwasị na nke a, uwe gị na-echebe gị pụọ na mmetụta ndị ọzọ, ma ọ bụ anyanwụ, mmiri ozuzo, snow ma ọ bụ na-atụghị anya n'okporo ụzọ, ọ bụrụ na ị daa ntakịrị ọdịda ọ bụla ugbu a (ịgba ịnyịnya ígwè) o yiri ka m nwere ọ dịkarịa ala otu ọdịda otu ọnwa. Uwe a na-agba ịnyịnya ígwè nke ị na-achọghị yourchọta igwe kwụ otu ebe gị ma ọ bụ nke na-adịghị echebe gị pụọ na ihe ndị dị na mbara igwe, ga-ahapụ gị nhụjuanya n'okporo ụzọ, mana ọ bụ nhọrọ onwe onye maka ihe dị mma, ọbụlagodi m.
Ka anyị banye nkọwa. (egwu dị jụụ) Nke mbụ na-agba ịnyịnya ígwè. Ọ dabara nke ọma, n'oge a anaghị eji ajị anụ kpuchie ya, kama ọ bụ nke dị nro na ọkụ Lycra.
Ugbu a, ekwesịrị m ikweta na m bụ onye na-achọ akwa na-amasịkarị m, mana m na-ahọrọkarị uwe mwụda dabara adaba na akwa lycra. Otú ọ dị, ụdị a na-ejide onwe ya bụ ezigbo ihe na igwe kwụ otu ebe n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ bụ ihe aerodynamic, nke dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ngwa ngwa, ọ na-egbochi gị jersey na-efegharị gburugburu n'ihi ihe niile dị na azụ gị n'akpa ebe ị na-eri nri gị, mgbapụta gị, ekwentị gị. Ya mere, na igwe kwụ otu ebe, ọ dị ezigbo mma ịmachi anya.
Na igwe ịgba ịnyịnya ígwè ị nwere ọtụtụ nhọrọ. Nke mbụ, ị nwere ogologo aka uwe maka oyi, obere aka uwe maka okpomọkụ, mkpọchi zuru ezu na ụfọdụ uwe mwụda nwere ọkara ogologo, m na-anụ ka ị na-ajụ, gịnị kpatara mkpọchi ma ọlị? Ọfọn, zipa zuru ezu na-eme ka o kwe omume Ikwesiri imeghe jersey gị kpamkpam ka ị yikwasị ya ma wepụ ya, yana kwa ịjụ oyi mgbe ọ dị ọkụ. Nkeji ọkara zipa bụ ntakịrị ikuku, mana ọ na-agbasi mbọ ike mgbe ị na-agbanwe.
Cannwere ike iyi uwe na-agba ịnyịnya ígwè na-enweghị zipa, ọ bụ naanị ihe siri ike itinye. Onwe m, echere m na uwe nwoke ma ọ bụ nke unisex na-aga nke ọma, belụsọ na ha na-adịkarị ogologo, nke pụtara na akpa ahụ kwụgidere na azụ, nke anaghị adị mma. (Ezigbo egwu) Na-esote, ịgba ịnyịnya.
Nke a bụ isiokwu dị ezigbo mkpa, ya mere nọrọ ọdụ ma nwee ntụsara ahụ maka nkọwa ole na ole. Ka anyị buru ụzọ kwuo maka oche oche. Ugbu a nke a bụ padding na uwe dị mkpụmkpụ nke na-echebe chassis gị site na sadulu.
Igwe akwa dị elu, dịka ọ dị na UMA GT ndị dị mkpụmkpụ, ma ọ bụ ndị a bụ ụmụ nwanyị doro anya LaalaLai dị mkpụmkpụ si ASSOS. Ha nwere ike inyere gị aka ịnọdụ ala na oche maka ogologo ụbọchị. E nwere ụdị mkpụmkpụ dị iche iche na ọdịdị na ọkpụrụkpụ nke oche mpe mpe akwa.
Ugbu a, ọ bụ ụmụ nwanyị na uwe mwụda a kapịrị ọnụ kaara gị mma? Ikekwe, mana ọ bụchaghị. Dịka ọmụmaatụ, achọpụtara m na ụfọdụ nịịka ụmụnwaanyị na-eyi egwu, mana ọ bụ ụfọdụ obere uwe unisex. Ihe dị mkpa bụ ịchọta ihe ga-adabara gị na nke dị mkpụmkpụ gị dabara nke ọma nakwa na oche oche ahụ bụ ezigbo ọdịdị. nke ahụ anaghị agagharị mgbe ị na-anya ụgbọala.
Ugbu a, anyị abịakwute uwe ime, ụfọdụ ndị ga-achọpụta na ọ dị oke njọ, mana ee e, ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè anaghị eyi uwe ime n'okpuru uwe ịgba ịnyịnya ígwè ha. Ugbu a enwere m ike ịhụ otu ihe a si dị egwu ma m ka nwere ike icheta na ụjọ tụrụ m mgbe m hụrụ ya nke ahụ bụ oge m bidoro ịgba ịnyịnya ígwè mana ihe bụ na uwe ime bụ naanị ebe mmezi esemokwu na esemokwu na -emepụta ebe ọ dịkarịrị mkpa. Chafing dị njọ nke mere na ịchọghị uwe ime ọ bụla, naanị ihe ị ga-eme bụ ịkpụ uwe mgbokwasị gị mgbe ị na-agbago ọ bụla.
Dị Mfe. Ugbu a, anyị abịakwutela ajụjụ ọzọ dị mkpa, ọkara nịịle ma ọ bụ obere mkpịsị ụkwụ? Shordị Bib nwere usoro nkwado a iji jide ha ma ị nwere ike ị na-eche ihe kpatara eji agba ịnyịnya ígwè na ndị na-akwụsi ike? Ihe kpatara nke a bụ na mgbe ị nwere ndị nkwụsịtụ, ị gaghị achọ eriri n'úkwù, nke ụfọdụ na-ahụ anaghị eru ala mgbe ha hulatara na igwe kwụ otu ebe. N'aka nke ọzọ, jiri ọkpa akwa n'úkwù ị nwere ike jiri obi eziokwu wepụ ha karịa ngwa ngwa karịa n'ihi na ịkwesighi imeghe jersey gị ka i wee wepụ obere mkpirisi, ndị a nwere ike ịbụ sekọnd dị oke ọnụ ahịa ị ga-efunahụ mgbe ị nọ na-achọsi ụlọ mposi ike. (egwu dị jụụ) Ugbu a, anyị abịakwute ndị uwe ojii, nke a na-eyikarị n'okpuru uwe ịgba ịnyịnya ígwè, ọ bụghị naanị mkpuchi ma kamakwa, na nke a dị ezigbo mkpa iji gbochie aesụ na anụ ọhịa adịghị efefe nsị gị.
Ahụmahụ na-enweghị nchekasị m nwere ike ịgwa gị. Undershirts na-abịa n'ụdị na ọdịdị na nha dị iche iche, dịka ọmụmaatụ nke a bụ ihe nkiri akpụkpọ anụ n'oge ọkọchị sitere na ASSOS, ọ dị ezigbo mkpa ma wọọ ọsụsọ pụọ na anụ ahụ gị, ebe nke a bụ mmiri mmiri / mgbụsị akwụkwọ nke ASSOS evo7 baselayer, ọ bụghị naanị nwere ogologo aka uwe ogologo oge ma dịkwa ezigbo mkpa ma bụrụ nke a gwara mmanụ iji mee ka ị kpoo ụtụtụ n'ụtụtụ. Enwere otutu ụdị gloves dị iche iche maka ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, site na ogwe aka ọzụzụ nke oge mkpịsị aka nwere mkpịsị aka dị mkpirikpi ruo neoprene maka mmiri ozuzo iji mee ka aka gị kpoo ọkụ, ikuku anaghị egbochi ya mgbe oyi na-atụ mana mmiri anaghị ezo, ndị a bụ ndị m bụ ọkacha mmasị bụ tiBuru mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ oge opupu ihe ubi, ha dị ezigbo mkpa ma dị mma ma na-ekpo ọkụ na ọbụlagodi nwere mkpịsị mkpịsị aka na mkpịsị aka aka ka ị nwee ike iji ekwentị gị na-enweghị wepụ ha. (egwu siri ike) ngwa.
Enwere ọtụtụ ngwa na ịgba ígwè. Nke a abughi ihe nduzi zuru oke, kama ọ bụ naanị nyocha ngwa ngwa; ka anyị kwatuo ya n'ime mmiri ozuzo ngwa ma na-na-ekpo ọkụ ngwa; mgbe ụfọdụ ị chọrọ ha abụọ. Ọmụmaatụ, nke a bụ sturmPrinz evo ASSOS jaket, nke bụ n'ezie mmiri na-egbochi gị nkụ na nnukwu mmiri ozuzo.
Maka nke a ị nwere ike iji okpu mmiri ozuzo nke na-egbochi mmiri ozuzo n'anya gị mgbe ọ dara, ọ bụ ezie na nke a bụ UMA GT wind jaket Ugbu a ọ bụghị mmiri na-enweghị mmiri, mana ọ na-egbochi ikuku kpamkpam na ọ na-ebu obere obere karịa jaket mmiri ozuzo. Mgbe ahụ, anyị nwekwara ndị na-ekpo ọkụ ikpere, ndị na-ekpo ọkụ ụkwụ, ndị na-ekpo ọkụ ogwe aka, ndị a bụ ụzọ dị iche iche dị iche iche iji kpoo ọkụ mgbe ọ dị jụụ n'ụtụtụ ma ọ bụ mgbede, dịka ọmụmaatụ. Can nwere ike iwepụ ha mgbe ọ dị ọkụ ma ịchọrọ aka obere aka.
Ga n'ihu gị nwekwara akpụkpọ ụkwụ nkwonkwo ụkwụ nke na-agabiga akpụkpọ ụkwụ gị na sọks ka mkpịsị ụkwụ gị nwee ọkụ. Dị nnọọ irè. E nwekwara nsụgharị mmiri.
Na n'ezie akwa a pụrụ ịdabere na ya iji mee ka ntị gị na isi kpoo ọkụ n'oge oyi. (egwu siri ike) Sock ogologo bụ ihe ịtụnanya na-ekpo ọkụ banyere mkparịta ụka n'etiti ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enwe mmasị ịkwa emo maka ihe egwuregwu maka ịghara ịkpụ sọks ma ọlị. N'ezie, ọ dị oge na-agba ịnyịnya n'okporo ụzọ mgbe ọ bụ oge ejiji ịwụ sọks ogologo ka ha ruru ikpere, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị m.
Ma ugbu a na ụfọdụ uru apụtawo n'ụzọ dị otú a na ha na-ahọrọ sọks dị mkpụmkpụ na ọzụzụ iji zere eriri nwa ehi, echere m na onye ọ bụla na-agba ịnyịnya ígwè ga-enwe ike ikwu eziokwu na mpako maka ụdị sọks ọ bụla ha họọrọ. (egwu siri ike) Ma ugbu a n'ụdị, onye na-echekwa ụdị ahụ? Ọ dị mma, anyị niile na-eche banyere ụdị. Mana ihe bụ, inwe ntụsara ahụ na ịnụ ụtọ ịnyịnya ígwè gị dị ezigbo mkpa karịa ịchọ mma gị.
E nwere ụfọdụ n'ezie, n'ezie nkecha na classy ịnyịnya uwe maka ụmụ nwanyị si n'ebe, Otú ọ dị, na ha na-arụ ọrụ kwa, ya mere, gịnị na-atọ gị ụtọ dị ka ị dị ka na igwe kwụ otu ebe? Enwere m olileanya na isiokwu a ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị nọ ná nsogbu banyere ụdị ụdị mkpụmkpụ ma ọ bụ ịcha akwa nke ịhọrọ. Mee ka anyị mara na ihe ị họọrọ ị ga - ahọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ nnukwu ngwa ASSOS GCN anyị chọrọ ịzụta, ị nwere ike ịchọta ya site na ịpị ụlọ ahịa ahụ wee hụ otu ASSOS si eme uwe mara mma ha mara mma site na ikiri ederede a n'okpuru. .
Kedu uwe kacha mma maka ịgba ígwè?
Uwe kachasị mma maka ịgba ígwè
Igwe kwụ otu ebenịịka. Shorts mere kpọmkwem makaịgba ígwèga-enye gị nkasi obi kasịnụ mgbe ị na-agba ịnyịnya.
Igwe kwụ otu ebejersey. Uwe-mkpụmkpụ-uwe mgbochi mmiriigwe kwụ otu ebejersey bụkwa aezinhọrọ n'ụbọchị ọkụ.
Igwe kwụ otu ebesọks.
Igwe kwụ otu ebeuwe aka.
40 ruo 50 ogo.
25 ruo 40 ogo.
N'okpuru 25 degrees.
Cycgba ígwè ọ̀ na-eme ka ị dị obere?
Ọ bụ eziokwu,ịgba ígwèadọ azụ afọ naeme gị nwata, nke ọma, na-echenke ntàagbanyeghị.Cygba ígwèna-enyere aka na ahụ ike, nrugharị ọbara gburugburu ahụ ma nyere akagịifelata.
Transcriter: Fernando Muñoz Onye na-enyocha: Maria PericleousEnweghị m ụjọ mgbe m na-emegharị uwe ahụ mgbe mmadụ asatọ nọ ebe a. (Ọchị) Ha gwara m na m ga - anwụ anwụ, agara m ịnyịnya ígwè. Akụkọ nke m n’ịgba ịnyịnya ígwè - m ga-arịọ maka ngosipụta nke aka iji hụ ma ọ ga - ada ụda - bụ: Amụtara m ịgba ịnyịnya ígwè mgbe m dị ihe dị ka afọ asaa, ebe m gafere si n’azụ ụlọ ruo ebe ahụ.
Afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gara n'ihu ntakịrị ihe mgbochi. Mgbe m dị afọ iri na abụọ ma ọ bụ iri na atọ, m nyara ebe niile. Igwe kwụ otu ebe bụ isi mmalite nke nnwere onwe m, ọ nyere m ohere ịgbapụ nne na nna m ma mee ka m nwee ike iso ndị enyi m na-emekọrịta ihe n’enweghị nne na nna m nọrọ n’ọnụ ụlọ nke ọzọ.
Ọ bụ nnọọ ụzọ magburu onwe ya isi nweta nnwere onwe! Mgbe ahụ, m tụgharịrị 16. Enwetara m ikike ịnya ụgbọ ala, enwere m ohere ịnweta ụgbọ ala ma ugbu a enwere m nkọwa ọhụụ nke ọkụ nnwere onwe, mana ole n'ime unu ga-ekerịta ụdị akụkọ ahụ na akụkọ ahụ na igwe kwụ otu ebe gị? Welie aka gị. Oo chimoo! Alms Ọ bụghị mmadụ niile.
N'ụbọchị m, anyị nwekwara mgbasa ozi mmekọrịta. Anyị emeghị ya na ekwentị anyị, anyị emeghị ya na ipad anyị ma ọ bụ kọmputa anyị maka na anyị enweghị otu n’ime ihe ndị a. Anyị ka nwere ike ịchọpụta ebe ndị enyi anyị nọ.
Taa, mgbe ị gara Facebook, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị na ndepụta m, enwere map nke St. Paul nwere obere ntụpọ na ọdụ ụgbọ elu nke na-ekwu, '@ MSP Airport mgbe m na-aga Chicago' 'Mgbe m na-aga Paris', 'Thezọ gara Timbuktu'. Anyị na-agbalị mgbe nile ime ka ibe anyị mara ebe anyị na-aga ma ọ bụ ebe anyị gara.
Anyị ga-ahụkwa foto nke ebe ndị a niile na ụbọchị ole na ole sochirinụ. Anyị makwaara ebe anyị na-aga na anyị maara ebe anyị nọ na anyị maara na anyị maara ebe anyịnya igwe nọ! Anyị maara ebe Danny, Timmy, Tony nọ, anyị maara ebe ha nọ n'ihi na anyị hụrụ igwe kwụ otu ebe na mpụga. Amaara m na nke a bụ obodo sayensị ebe a na ndị na-ege ntị, ikekwe ọtụtụ n’ime unu bụ ndị sayensị, na unu niile hụrụ data n’anya ma hụkwa nnukwu data n’anya, agaghị m enye unu nnukwu data, mana m ga-enye ị a akụkọ ifo w data ga-enyere aka ịkpụzi mkparịta ụka anyị na-aga inwe. 600,000 - Nke a bụ ọnụọgụ ndị na-anwụ kwa afọ na United States site na ọrịa zuru oke metụtara mmega ahụ. 33,000 - Nke a bụ ihe na-eme m ka onye nzuzu na-eme.
Nke ahụ bụ ọnụọgụ ndị na-anwụ n’ihe ọghọm ụgbọ ala na United States kwa afọ. Ọ nọkwa na ọkwa a ruo ọtụtụ iri afọ. Aga m ajụ gị n’etiti ndị na-ege ntị mmadụ ole n’ime unu nwụrụ, onye bụ enyi ma ọ bụ onye otu ezinụlọ, na mberede ụgbọ ala ma ọ bụ na mberede ụgbọ ala? Ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ ma ọ bụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke gị.
Nke ahụ bụ ọtụtụ ndị mmadụ! Mgbe ị nụrụ akụkọ ahụ, anyị anaghị anụ ọtụtụ ihe gbasara ya, enweghị oke iwe, n'eziokwu ọ dị ka ọnụọgụ a na-anakwere dabere na anyị anaghị eme ọtụtụ ihe banyere ya. Achọrọ m ịjụ gị ole n'ime ha? You nwetala ndị enyi ma ọ bụ ndị ezinụlọ nwụrụ n’ihi mwakpo nke ndị na-eyi ọha egwu n’ụlọ? Ọ dị mma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla, mana mgbe ị nụrụ akụkọ mgbede ị naghị anụ ya - ihe mberede ụgbọ ala anaghị eme akụkọ ahụ, mana ọ bụrụ na onye ISIS ma ọ bụ al-Qaeda gburu mmadụ, ọ na-agba ọsọ na ọ na-adịgide maka ụbọchị ole na ole. Ọ bụ akụkụ nke usoro mgbasa ozi 24-hour-atọ.
Otu. Onu ogugu ndi mmadu no n’elu igwe ndi igwe a zoputara. 12.
kenda igwe kwụ otu ebe
Nke a bụ ọnụọgụgụ nke otu onye na-efufu mgbe otu afọ gachara njem igwe kwụ otu ebe. 15. Nke a bụ ọnụọgụgụ ndị dọkịta gwara anyị ka anyị jiri mgbatị ahụ zuru oke kwa ụbọchị.
Mgbe m chere banyere mmega ahụ, m na-eche maka ndị mmadụ ịbanye na SUV ma ọ bụ ụgbọala pikọp na-aga mgbatị ahụ, (ọchị) na-agbagharị gburugburu ebe ị na-adọba ụgbọala iji chọta ebe dị nso n'ọnụ ụzọ (ọchị) wee gbagoo onye na-ebugharị ya ha nwere ike iji StairMaster. (Ọchị) Ka ị nwee ike ịnya ergometer ahụ. M na-enyo, n'ihi na ị 'm ọchị, na e nwere ụfọdụ eziokwu na ị na-ahụ na ọ na-eme ihe n'eziokwu na-ewute m. 50.
Nke a bụ pasent nke njem anyị na-eme n'ụgbọala anyị nke na-erughị kilomita abụọ. Ọ dị mfe ịkwọ ụgbọala, dị mfe ije. 4,8%.
Nke ahụ bụ akụkụ ejiji na Minneapolis, ọnụ ọgụgụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, ihe dị ka mmadụ 4,500. Ọ na-abawanye kwa afọ. Mgbe m na-agba ịnyịnya ígwè m, enwere m ike ịhụ ya. 100,000.
Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ. Onye ọ bụla bi na ala ịta ahịhịa mana ọ ga-achọ ibi n'obodo ahụ mana ọ gaghị akwụli ya. Na-ere ụgbọ ala ahụ, ọ bara uru nnukwu ego 100.
Ugbu a ị nwere ike ị nweta ụlọ $ 100,000 karịa n'etiti etiti obodo ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ na mpaghara na-eme njem na-eme njem, mpaghara enyi na ịnyịnya ígwè, ma nwee ohere ịnweta ihe dị na agbata obi na-ejighị ụgbọ ala. Asatọ. Nke a bụ ego ole euro ha gbakọtara na mba Nordic dị ka nloghachi na ntinye otu euro na akụrụngwa igwe na obodo ha.
Mmetụta gburugburu ebe obibi, mmetụta ahụike na-efu - site na ịkwọ ụgbọ ala na ịgba ịnyịnya ígwè - bụ nnukwu nloghachi na itinye ego. Ma ọnụọgụ ikpeazụ 19,000,000.
Nke a bụ ọnụọgụ nke njem igwe kwụ otu ebe na ụbọchị ọ bụla na US, kama na Netherlands. Amalitere m ịgwa gị na enwere ike ịnwe akụkọ gbasara m na ndụ na ahụike m. Abụ m onye ọrịa na Mayo Clinic site na 2007 ruo ugbu a, mana m soro dọkịta GI m gaa obodo ejima ahụ mgbe mkpakọrịta ha gafere.
Ma mgbe akwụkwọ m ma ọ bụ ihe ndekọ m bịara, ahụrụ m na o dere na nleta ikpeazụ m: 'Onye nwere ndidi dị obere karịa ka ekwuru'. Ee! (Ọchị) Nke ahụ bụ otu ihe anyị niile chọrọ ịhụ, ọkachasị anyị bụ ndị karịrị afọ 60. Enwere m Ọrịa Crohn Okwu a na - agwa m bụ, 'Duodenal Crohns nwere ọrịa na-enye nsogbu.' O meela ka ndụ m jọọ njọ.
Na 2007, arụ m ọrụ ole na ole na ọrịa ahụ gbasaa ngwa ngwa mgbe emechara m. Na '08 ma ndị dọkịta nọ n'ụlọ ọgwụ Mayo na ndị dọkịta na Virginia Mason Medical Center dị na Seattle kwuru, sị: Ọrịa ahụ na-aga n'ihu na-agbasa dị ka ọ gbasasịrị, ị gaghị enwe ike iri nri n'ime afọ atọ na ise. 'Ọ bụ ezigbo oge nhụjuanya na ndụ m, ọtụtụ oge m riri onwe m na akpa na akara picc.
Kedu ihe bụ TPN, Amaghịdị m ma ọ bụ aha Latin ma ọ bụ Bekee maka ya? Naanị m maara na akpa azụ bụ enyi m n'ihi na ọ na-enye m nri. Gịnị ka m mere? , ma ọ bụ a gwara ha na ha nọ n'ọgwụgwụ ọdụ, na-eme ka à ga-asị na m gbara ịnyịnya ígwè m. Nke mbụ gbasara ngọngọ n'ihi na adịghị m ike.
N'echi, mgbochi abụọ, ụbọchị nke atọ, gburugburu ngọngọ ahụ. Na mgbe ọnwa ole na ole m mere m ụgbọala a kilomita ole na ole. Mgbe afọ ole na ole nke ịnya ụgbọ ala dị ka nke a - emere m mgbanwe ole na ole na nri m, mana obere - mgbe afọ ole na ole gasịrị, enwetara m ya megide ọgwụ m ga-apụ na nnukwu ọgwụ mgbochi m na-ewere - enwere m nwute dr Oriri mgbe ị nọ ebe a.
Ha bụ ndị dị ize ndụ. Ha enweghi mmetụta ọjọọ ọ bụla m na agbanyeghị, enweghị m mmasị n'echiche iwepụ ha ka m wee wepụ ha, naanị nweta onye na-ebelata acid na ọ bụ ya. Kemgbe ahụ m na-akawanye mma.
M ka nwere ọrịa Crohn, ọ bụ ọrịa na-adịghị ala ala anyị bi na ya ruo mgbe ebighi ebi ma enwere ọkụ na-aga ebe a na ebe ahụ, mana maka ọtụtụ akụkụ m ka mma ma ana m akwụ ndụ m igwe kwụ otu ebe. Nke a bụ Laura na Sam. Ha abụọ nwere ọrịa Crohn, ha alụọla.
Sam nwere ihe o kwenyere na ọ bụ ịwa ahụ na-azọpụta ndụ ebe a na yolọ Ọgwụ Mayo, ọ na-enwekwa obi ekele maka enyemaka ọ nwetara. Wantedchọrọ ịchọta ụzọ iji nyeghachi site na Crohn's & Colitis Foundation, yabụ kedu ihe ị mere? gbara ịnyịnya ígwè, ọ bụ ezie na oge a, ịnyịnya ígwè ahụ si Seattle, WA; ka Portland, ME. Ndị a bụ ndị mmadụ abụọ na-arịa ọrịa n’oge nsogbu a niile, mana ha kpebisiri ike gafee mba nke ọzọ ma mee nke ọma.
Mgbe ha rutere n’isi nke ọzọ, ha kọrọ na ahụ siri gị ike. Anụrụ m akụkọ na MPR obere oge gara aga, achọrọ m icheta aha nwanyị ahụ. Naanị ihe m chetara bụ na ọ dị afọ iri asaa na abụọ, ya na Dọkịta ya wee tinye ya n’azụ tandem ya wee gaa njem igwe kwụ otu ebe, njem siri ezigbo ike, oge ọ si na igwe kwụ otu ebe pụta, ihe mgbaàmà ya adalatala.
Ha laghachiri usoro nke ụbọchị ole na ole, ha wee mee njem igwe kwụ otu ebe ọzọ wee belata. Nwanyị a - ọ dị ka isiokwu ị na-ahụ na ihuenyo ebe a - ha achọpụta na ịgba ịnyịnya ígwè na-ebelata mgbaàmà ma ọ bụrụ na ị nọgide na-eme ya, ị nwere ike ịbụ onye mgbaàmà karịa, ndụ ma ọ bụ ndụ enweghị mgbaàmà n'ihi ọdịdị mgbanwe nke igwe kwụ otu ebe. Ọ bụghị naanị ihe egwuregwu ụmụaka ji atụrụ ndụ, echere m na ọ bụ ezigbo ngwa ọrụ.
Am sterdam, nke bụ ụdị nke Mecca nke ịgba ịnyịnya ígwè - Achọrọ m iwetara anyị ọnụ ọgụgụ nde 19 ugbu a - Amsterdam bụ ihe dị ka Mecca, ka anyị chere taa, enwere nde mmadụ, dịka m kwuru, kwa ụbọchị ịkwọ ụgbọala gafee obodo. E nwere nnukwu akụrụngwa ịgba ịnyịnya ígwè, ị nwere ike ịgafe ebe ọ bụla, ị na-anọkarị n'etiti ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè. Ma ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị.
Na 1960, Amsterdam dị ka nke a: Foto nke ụgbọ ala kpuchiri, e nwere onye na-agba ịnyịnya ígwè. Ọ bụghị ebe dị mma maka ya ịkwọ ụgbọala, mana ọ laghachiri na 1960s. Na mbido 1970s enwere ọtụtụ ụmụaka, n'ihi ihe ụfọdụ, ndị ụgbọala na-egbu na Netherlands, yabụ ụmụ nwanyị bidoro mmemme - n'ezie ngagharị iwe - nke akpọrọ 'Kwụsị igbu ụmụaka anyị!' Ọ bụ ozi dị ike nye gọọmentị.
Gọọmentị malitere mmemme afọ iri iji, nke mbụ, chebe ndị njem ya na - adịghị ike - ndị ji ụkwụ aga na ndị na - agba ịnyịnya ígwè - ma mee ka ọ dị mfe ịnụ ụtọ ahụ ike na uru akụ na ụba ha nwere ike ịnweta site na ime ka ndụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè dị mfe. Nke a bụ otú o si dị taa. Agụwo m na foto a, e nwere ụgbọ ala isii, nke ahụ bụ akụkụ kachasị mfe ịgụta.
Enwere ndị na-agba ịnyịnya iri isii! Na United States, ọbụlagodi taa, n'otu ebe dịka Minneapolis, nke a na-ahụta dịka obodo mara mma-enyi igwe kwụ otu ebe, ọnọdụ ahụ tụgharịrị. Ì chere na kwụ n’ahịrị na nọmba ụgbọ ala 59 ahụ ga-abụ ihe na-ebelata nrụgide ma ọ bụ na ị chere na ọ ga-abụ nrụgide karịa? - hapụ onwe gị ka ị bụrụ otu ọgba tum tum ndị na-agba ọsọ na ebe nchekwa, ụzọ dị nchebe nke ga-enye gị ohere ị nweta ebe ị na-aga ngwa ngwa? Ntakịrị nso anyị bụ Detroit, MI; Enweela nnukwu ọganihu na itinye ego na Detroit na afọ ole na ole gara aga, ọkachasị obodo na obodo izizi, mana na obodo ahụ ọ dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ochie ndị mebiri emebi ma dị njikere ibibi; na n'ọtụtụ mpaghara enwere ụlọ ndị yiri nke a na-adịkwaghị maka ndị mmadụ. Zọ mgbapụ si n'obodo ahụ abụwo ihe ịtụnanya site na ụfọdụ akụkọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị hapụrụ ihe mbụ ma lee anya na obodo nke ise kachasị ukwuu na mba ahụ.
M gbagara n'ime otu nwoke aha ya bụ Jason Hall mgbe ọ na-ekwu okwu na ogbako obodo ejima na February, ọ na-achọkwa ihe ọ ga-eme ka ya na ndị enyi ya gbakọta na Detroit n'ihi na agbata agbata agbasasịla na ọtụtụ ihe ndị ahụ agbaghapụrụ n'etiti ha dina. Ya mere, Jason na-agba ịnyịnya ígwè. O buru ụzọ mee ya na ezigbo enyi ya, ha mere ya n'abalị Mọnde, abalị abalị ha soro ndị enyi ole na ole mee ya.
Jason na-akọ akụkọ a, ha mere ndị enyi a ezigbo iwe site na-ekwusi ike ka ha kpọta ndị enyi ha niile na Mọnde na-esote. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, e nwere ọtụtụ narị ndị ọkwọ ụgbọala, na taa mgbe ha na-eme nke a na-agba ịnyịnya ọ bụla na Monday n'abalị na Detroit na ụgbọala ha ka ha dị iche iche agbata na-ahụ ihe na-eme na obodo. Ikwere m mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè gị? Hụ ụwa dị iche karịa ka ị na-ahụ ya site na windo windo.
Inwere ike isi ya, ị ga-anụ ya, ịnụ ya ma nwee ike ịhụ ya. Taa mgbe Jason na-agba ọsọ abalị abalị Monday a, a ga-enwe ọtụtụ puku ndị ọkwọ ụgbọ ala, m ga-anya ụgbọala na nke mbụ ya na Jason na ndị ọrụ a nke mmadụ 3,000 maka otu izu malite Mọnde ma enwere m obi anụrị, na-eru nso n'ụlọ, na St Paul, e, Ozugbo e nwere otu ụzọ n'ụzọ anọ - ọ ka bụ otu ụzọ n'ụzọ anọ, m chere - a na-akpọ Rondo.
Ọ bụ a n'ezie jụụ obi d. Enwere akara tram nke gara Rondo Av ozugbo. Ọ bụ mpaghara na-agagharị agagharị, na-agagharị agagharị, ị maara ndị agbata obi gị bụ, enwere azụmaahịa dị ebe ahụ, enwere ụka, ụlọ nzukọ - ebe ọ bụ ndị Juu na ndị Afro-America bi na ya.
Ọ bụ agbata obi, ọ bụkwa mpaghara dị egwu, rue mgbe Ngalaba Highway Federal - nke a maara ugbu a dị ka USDOT - bịara wee mee ka Rondo dị ka nke a taa: Nke a bụ Street 94, nke na-agafe n'obi nke St. na-eduga Paul , na oge ọ bụla m na-anya ụgbọala n'okporo ụzọ a na ọtụtụ ihe gbasara ya, obi na-agbawa m n'ihi na amaara m ụdị agbataobi Rondo, ọ na-ekwughachikwa onwe ya ọtụtụ puku ugboro na United States. Ee, igwe kwụ otu ebe nwere ike igbanwe ndụ na igwe kwụ otu ebe nwere ike igbanwe obodo, mana ụgbọ ala nwekwara ike ịgbanwe.
Ma ọ bụ ajụjụ nke eluigwe na ala anyị na-ahọrọ. Na Minneapolis, onye na-agba ịnyịnya ígwè nke obodo abụọ dị n’etiti Minneapolis na St. Paul; bi na St.
Paul, na-arụ ọrụ na Minneapolis na agbanyeghị y mgbe m na-agba ịnyịnya ịnyịnya ígwè m n'akụkụ ọwụwa anyanwụ n'ofe Mississippi na Marshall Street Bridge, aghaghị m itinye elekere m azụ 25 afọ. (Ọchị) E nwere ụzọ ụzọ ọwụwa anyanwụ ọdịda anyanwụ na Minneapolis nke bụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè ochie, agbahapụla nke anyị na-akpọ ugbu a 'The Midtown Greenway' na obodo ahụ nwere ọhụụ iji mee ka Midtown Greenway ghọọ ezigbo okporo ụzọ igwe. Enwere ngalaba dị ole na ole na ụzọ a na-agagharị, maka ọtụtụ akụkụ enwere naanị ọnụ ụzọ na ụzọ ọpụpụ.
Ọ bụ ụzọ kachasị ọsọ iji gaa ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ n'etiti osimiri ahụ na agbata obi Uptown na Minneapolis. Mana ihe dị ịtụnanya karị banyere Midtown Greenway bụ na ọ dọtara ntinye nke onwe. You na-echeta ọnụ ọgụgụ euro asatọ m kwuru okwu ya na Northern Europe, otu ọ ga-esi gosipụta nloghachi nke itinye ego euro? Nke a bụ ihe ụzọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ka taa, nke ejiri condominiums na ụlọ obibi.
Ihe karịrị ijeri dollar abụọ na itinye ego .Mmepụta nkeonwe. N'ihe karịrị ụlọ obibi ọhụrụ nke 2,000, nke kachasị ewu ewu na Millennials ndị chọrọ ịnya ịnyịnya ígwè ha iji si na bb n'ihi ụgbọ ala ahụ dị oke ọnụ, ụgbọ ala ahụ na-emetọ gburugburu ebe obibi ma ọ bụghị ihe ọchị, ọ na-enye nsogbu.
N'ezie, Minneapolis dị mma nke ukwuu ịbụ obodo igwe kwụ otu ebe nke na ịgba ịnyịnya ígwè ruru nkịta. (Ọchị) Nke a bụ ebe m na-esi ụgbọala arụ ọrụ, ebe m ga-eji Lurey greyhound m gaa. (Ọchị) Nke a bụ igwe kwụ otu ebe ndị Dutch na-akpọ 'Bakfiets'.
Otu onye ọrụ ibe m gụrụ ya 'Barkfiets'. (Ọchị) N'otu oge, m ga-ahụ foto m na-agba ịnyịnya ígwè m ma m na-amụmụ ọnụ ọchị, anaghị m amụmụ ọnụ ọchị maka igwefoto, ana m amụmụ ọnụ ọchị n'ihi na m na-amụmụ ọnụ ọchị oge ọ bụla m nọ na igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na m gafere ndị ọgba tum tum na Minneapolis? Mgbe ụfọdụ, ọtụtụ n’ime ha na-amụmụ ọnụ ọchị.
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ karịa ịnya ịnyịnya ígwè. N'ezie, ọ dị ka ịnya igwe kwụ otu ebe, ị gaghị echezọ otu esi eme ya. (Ọchị) Ya mere ndị nke hapụrụ anyịnya igwe n'ihi na ha dị ka ụmụaka ji egwuri egwu, were ụgbọala pụọ ​​mgbe ị gbara afọ iri na isii, lee ohere ị ga-eji gbalịa ọzọ.
M gbara ịnyịnya ígwè m hụ ihe mere m. Kedu ihe ga - eme gị mgbe ị na - agba ịnyịnya ígwè? (Ịkụ aka)
Nwere ike iyi jeans maka MTB?
Ee, ọ dịghị ihe kpatara yaị nwere ike'tigwe kwụ otu eben'imejeans. Otú ọ dị, ákwà ndị ọzọ dị mma karịa n'ihihanye mmiri wick, mkpuchi mgbe mmiri, na mma mgbanwe. Mgbejeansnwere ike adabara maka njem nkịtị na ihu igwe dị jụụ ma ọ bụ nke akọrọ,haabụghị arụmọrụ kacha mma.
Levis ka na-eme jeans na-ebugharị?
Ọ bụrụ na ị nwere mbụLevis Commuter jeans, ha namereya na oyi akwa ozo n'okpuru oche nkeogologo ọkpa. Echiche agbakwunyere na-adịgide adịgide mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè na maka ejiji kwa ụbọchị. Mana nke a pụtara na ọ na-adịkarị obere ahịa ka ha kwụsị ya.
Womenmụ nwanyị na-eyi akwa bekee maka ịgba ịnyịnya ígwè?
Agaghị ejide obere uwe gị
Ọtụtụ ụdịgarụpụta iri na abuo dị iche icheAkwụkwọ Nsọnịịka maka ụmụ nwoke na ole na ole - ma ọ bụrụ na ọ bụla -Akwụkwọ Nsọnịịkaụmụ nwanyị. Ma dị ka ọnụ ọgụgụ nkeụmụ nwanyịna-agba ịnyịnya naiyi akwanịịka na-abawanye,Ụmụ nwanyịuwe na-etolitekwa.Ọkt 16 2014
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji eji akwa uwe?
Hayikwasị akwa uwe, ha na-agbago ugwu dị n'ebe ezoro ezo, ha na-agakọkwa nke ọma. Looseuwemepụta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ikuku na-adaba adaba ma belata gị. Formdị ndị ọzọ dabara adaba nauwebụ, ka ị na-eme ikuku, ị ga-aga ngwa ngwa.
Gini mere uwe igwe ji adi oke oke?
Nke ahụ bụdị oke ọnụ. Ha choro otutu eyeballs na ngwaahịa ha dika o kwere mee ma ha kwesiri inweta uzo ndi mmadu. Onye na-ere ahia nwere ike ikwado ngwaahịa ma nwee okporo ụzọ na saịtị ha ma ọ bụ ụkwụ na ụlọ ahịa ha ma ọ dịkarịa ala nye ya ohere.Jul 15. 2014
Gịnị na-eme n’ahụ́ gị mgbe ị na-agba okirikiri kwa ụbọchị?
Ọtụtụ njikọ njikọ nyochaịgba ígwènatoro ogologoafọ ndụ, ma ọ ka bụ ihe omimi na US. Nnyocha ọzọ nke Britain chọpụtara nandị na-agba ígwèbụ 15% na-erughị ala ịnwụ n'ihi ihe ọ bụla. Nnyocha ọmụmụ Danish chọpụtara na ịkwọ ịnyịnya ígwè mgbe niile nwere ike belata ihe ize ndụ nke nkụchi obi site na opekata mpe 11%.29.01.2020
Kedu ụdị jeans ị na-eyi na igwe kwụ otu ebe?
Mgbe igwe kwụ otu ebe bụ njem gị, ịchọrọ inwe ike isi na ya pụọ ​​na ihe ọ bụla ị na-eyi. Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-enwe jeans ọ bụla, ọ ga-arụ ụka na ị ga-akwụ ụgwọ maka otu ụzọ ka mma maka ịgba ịnyịnya ígwè. Rịba ama na enweghị okike nwoke na nwanyị mgbe a bịara n'ịgba ịnyịnya ígwè: ụmụ nwanyị nwere obere ịhọrọ. 1. Osloh Okporo ụzọ Jean
Kedu ụdị uwe ndị na-agba ịnyịnya ígwè ụmụ nwanyị na-eyi?
Họrọ site na nnukwu ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya ígwè, uwe na-agba ịnyịnya maka ụmụ nwanyị na uwe ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya, nke ezubere iji hụ na nkasi obi, usoro okpomọkụ na nchekwa na njem ị na-esote ugbu a. Zụọ ihe kachasị ọhụrụ anyị banyere ngwa ịnyịnya ígwè ụmụ nwanyị taa ma ọ bụ chọgharịa na mbara igwe anyị sara mbara karịa maka nhọrọ karịa.
Kedu mgbe a ga-eyi jeans na-agba ịnyịnya ígwè n'oge mgbụsị akwụkwọ?
10 nkecha ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya ígwè jeans ka ịbanye n'ime mgbụsị akwụkwọ. Fall na-aga n'ihu. Na mara mma mgbụsị akwụkwọ na agba na jụụ, ụbọchị crisp abịa a dum ọhụrụ set nke ejiji chọrọ maka na-gburugburu obodo. Oge ndị uwe ojii na uwe aka dị mkpụmkpụ agafeela, ugbu a anyị na-eweta n'ígwé!